बाबुरामले करिश्मा मानन्धरको तस्बिर किन यतिधेरै मनपराए ? – ZoomNP
बाबुरामले करिश्मा मानन्धरको तस्बिर किन यतिधेरै मनपराए ? प्रकाशित मिति: आइतवार, साउन ३०, २०७३ समय - २:५२:०८ काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालले अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको तस्बिरलाई आफ्नो फेसबुक पेजमा राखेर सदस्यता खुला भएको सूचना जारी गरिरहेको छ । नयाँ शक्तिको फेसबुक पेजमा करिश्माको तस्बिरसँगै पार्टीमा सदस्यता खुला रहेको जनाइएको छ ।
स्पोन्सर गरेर राखिएको फेसबुक पेजलाई बाबुराम भट्टराईले पमोट गरिरहेका छन् । नयाँ शक्ति नेपालको केन्द्रीय अन्तरिम परिषदकी सदस्य करिश्माले कति सदस्य बढाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै । फेसबुकमा करिश्माको फोटो हेरेकै भरमा नयाँ शक्तिको सदस्यता लिनेहरूको भने खासै संख्या वृद्धि होला जस्तो छैन ।
बाबुरामले करिश्मा र सरोज खनाललाई नयाँ शक्तिमा भित्र्याएपछि कलाकारहरू खासै भित्रिएका छैनन् । कलाकारहरूको सन्तोषजनक रुपमा उपस्थिति नभएपछि बाबुराम जिल परेका छन् । उनले करिश्मा र सरोजलाई छिटो कलाकारहरूलाई नयाँ शक्तिमा ल्याउन दबाब दिने गरेको चर्चा फिल्मी क्षेत्रमा चल्ने गरेको छ ।